Daawo Sawirada: Nin Ganacsade ah oo guursaday 120 Xaas iyo sida ay ku dhacday !! | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Guurka News Daawo Sawirada: Nin Ganacsade ah oo guursaday 120 Xaas iyo sida ay ku dhacday !!
Daawo Sawirada: Nin Ganacsade ah oo guursaday 120 Xaas iyo sida ay ku dhacday !!
Wednesday, September 20, 2017 Bulshada , Guurka , News Edit
Bulsha:- Godadlenimada waa sharci-darro gudaha dalka Thailand, hayeeshe taasi kama joogsan Casanova inuu 120 xaasas guursaday, dhalayna 28 carruur. Waxa qeyrul-caadiga ah waa in dhammaan xaasasku ay is wada garanayaan.